LibreOffice 4.0.0 RC1 dia mety misy fanohanana ho an'ny Personas | Avy amin'ny Linux
LibreOffice 4.0.0 RC1 dia mety misy fanohanana ho an'ny Personas
Ahoana no hanohanako ny olona? Marina ny anao, olona, ny rafitra napetrak'i Mozilla Firefox hanova ny hoditry ny mpizaha ary hanome azy io mikasika azy manokana.
Ity fampiasa ity dia azo alefa tsy misy fampiasa ao LibreOffice 4.0, amin'ny alàlan'ny fidirana fotsiny LibreOffice »Tools» Personalization »Select Persona ary hahita zavatra mitovy amin'izany isika:
Avy amin'ny tanan'i Michael Meeks mpamorona ny LibreOffice ary afaka mamaky bebe kokoa momba izany ianao amin'ny Ity rohy ity.
Manokana indrindra, na dia tsy ratsy aza ilay hevitra, saingy mieritreritra aho fa tsy izany ny fiovana hita maso izay andrasan'ny mpampiasa an'ity Office Suite ity. Na izany na tsy izany, dingana mandroso io, ho hitantsika ny fivoaran'ny raharaha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » LibreOffice 4.0.0 RC1 dia mety misy fanohanana ho an'ny Personas
Tsy ratsy, fa aleoko miova endrika hafa, araka ny voalaza ao amin'ilay lahatsoratra.
Mampiasa LOv 4.0.0 RC2 aho .. Ahoana no hanamariko fa afaka mametraka "People" aho
Raha miasa 😀
Ao amin'ny lahatsoratra dia milaza izany .. ¬¬
¬¬ Efa tsapako io .. xD
xDD Ankehitriny tsy maintsy havaoziko ny lohatenin'ny lahatsoratra .. Tsy afaka intsony izy io, fa ao koa.
Eny .. azoko ny safidy fa manomboka eo ka miova ny lohahevitra .. mbola lavitra ny lalana. Ho ny KDE ve izany? xD
Tena tiako ny mampahatsiahy ahy an'i Mozilla ny sary voalohany fa ny hinoako fa izay tian'ny mpampiasa indrindra dia ny manova ny lohahevitra kisary.
Tsy ny sary masina ihany, fa ilay interface feno. Mazava ho azy fa tsy toa an'i Calligra, satria na miezaka mafy aza aho dia tsy zatra mampiasa azy.
Tena tsara i Calligra, saingy tsy afaka nifanaraka tsara koa aho, ka niverina nanao malalaka. Izy io koa dia tsy nifanaraka tamin'ny zavatra noforonina tamin'ny solosaina finday miaraka amin'ireo libreoffice sy ireo noforonina teo amin'ny birao misy ahy miaraka amin'ny calligra ...
Marina ny Calligra lafo be ny mampifanaraka azy ary raha ampitahaina amin'ny liibreoffce dia tena fototr'izany izy io, saingy mbola tena tsara ary manao ezaka be ny Libreoffice.
Tsy miteny tsia aho. Tena mampiasa Calligra indraindray aho, saingy tsy zatra izany ary mijery, nanandrana ...
Azo atao ny manova ny lohahevitr'ireo sary masina, raha ny tena izy dia misy ny sasany tena tsara, tsy tadidiko ny fomba nanaovana azy teo am-baravarankely, mety ho resaka firaketana ny tenanao izany.
Marina fa ilaina tarehy lehibe iray, fa tiako ilay hevitra ^^
Miaraka amin'ny fanohanan'ny olona dia noheveriko fa fanohanana ireo sembana izany. Sangisangy inona.
Tsy tokony handany fotoana amin'ny resaka adaladala toa izany izy ireo.
Inona no nitranga tamin'ny interface web noresahan'izy ireo, ilay hivoaka amin'ny kinova manaraka izay tsy fantatro hoe firy ny dikanteny lasa izay?
Toa tsara izany.
Tsy fampifanarahana tranonkala izy io, fa tetikasa iray mitovy amin'ny Google Docs, andao, birao iray ao anaty rahona.
Nilaza koa izy ireo fa halefa any amin'ny Android sy iOS, saingy mila fotoana ireo zavatra ireo.
Noheveriko fa ho interface web izany ary azo apetraka amin'ny mpizara rehetra.
Na izany na tsy izany, toa handeha lava io.
Etsy ankilany, maro ny olona mangataka ny hanova ny fisehon'ny fampiharana, tiako manokana ny momba azy ary aleony ampidirina ao ny fanatsarana fa tsy ny fiovan'ny endrika ivelany izay azo antoka fa ho olana.
Tadidio izay nitranga tamin'i Blender, very tamin'ny voalohany ilay mpampiasa tamin'ny interface vaovao ary "saika" toy ny fianarana nitazona ilay programa indray izy nefa soa ihany fa nihatsara kokoa.
Manantena fotsiny aho fa any LibreOffice dia tsy mikorontana izy ireo amin'ny alàlan'ny fandikana ny interface ny suite microsoft, ho an'ny firaketana dia tsy mpankafy aho fa noho izany dia aleoko mijanona ho toy ny misy azy, dia manontany izany fotsiny aho.
Tehaka ny ezaka ataon'ny mpamorona; Fa raha miresaka fanovana eo amin'ny sehatry ny interface izahay dia heveriko fa tena ilaina ny manangana ny tarehy, mba hanavaozana bebe kokoa ny interface.
Etsy ankilany, heveriko fa tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny sehatra miasa izy ireo.
Pffu tokony hanao interface hafa fotsiny ry zareo ..., tena ratsy tarehy toa izany, tsy miteny aho hoe mandika biraon'ny ms, fa farafaharatsiny zavatra toa ilay osx suite, tsotra sy angamba zavatra vaovao, miresaka amin'ny mpamorona ary henoy indray mandeha izy ireo.
Tahaka ny hafa, heveriko fa tsy ampy izany. Ny LibreOffice dia mila fanovana haingana.
Tsaho fa ny drafitra Apache dia ny hanova ny interface interface ho an'ny OpenOffice 4.0. Toa mitovy amin'ny Lotus Symphony izany.
Zavatra toa izao na toy izao:
Heveriko fa lesoka famolavolana ny fametrahana saha marindrano, jereo ao amin'ny pikantsary «font», ohatra, amin'ny baraingo mitsangana, mahatonga ahy haniry hanao mockup for libreoffice miaraka amina endrika vaovao aza, ary etsy ankilany, afaka avelao i Tihanum hamorona ilay antsoina hoe ilay namorona ny sary masina tsara faenza dia mamorona ny kisary ho an'ny libreoffice 4.0 hoy izy ireo?
Andriamanitra ô! Mbola ratsy kokoa noho ny tamin'ny xd aza izy io
Hmmm, tsy hanahy izany aho. Heveriko fa ny tena zava-dehibe dia ny fanatsarana ny fifandanjana 100% eo amin'ireo kinova Microsoft Office ho avy, handrora ny tavan'ny bastards izay manahirana ny isaky ny kinova vaovao. Ary ampio koa ny fampiasa toy ny mpamorona kisary na fitaovana vaovao toy ny macros. Heveriko fa mihoatra noho ny ampy izany. Cheers…
Ahoana no ahafahako manana tahiry hampiasa ny beta?
Tsy mila fanovana tarehy aho raha oharina amin'ilay maodelin'ny interface. Toy ny ankehitriny dia mamokatra be izy io. Tsy milaza aho hoe tsy maintsy ajanonao ny fanavaozana na zavatra hafa toa izany, saingy mieritreritra aho fa ny fametrahana sary ambadika ao amin'ny LibreOffice dia toa tsara ary amin'izao dia efa ampy izay.
Mieritreritra aho indraindray fa raha mbola miasa izy io dia tsy maninona ny ambiny, fa mba ekena fa "mivarotra" ilay sary, iza aminareo rehefa mitady vehivavy ary tsy miraharaha na tsara tarehy na ratsy tarehy? ary lovia sakafo mahavelona sy vaovao nefa tsy dia aroso? Heveriko fa indraindray ny fikirakirana ny fampiasa ary ankehitriny, tsy mametraka hatsarana aminy, dia fahalemem-panahy, sa tsy izany? Ka heveriko fa zava-dehibe ny interface, hany ka hanaiky mora foana ny vokatra ny mpampiasa vaovao.
Ny zava-mitranga dia tsy "vokatra" toa ny M $ Office ny LibreOffice, biraon'ny birao maimaimpoana notazomina sy novolavolain'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra, ka tsy mila mivarotra na inona na inona ianao, na amin'ny lafiny hafa, araka ny anarany , manolotra fahalalahana. Mino koa aho fa, satria azo antoka fa misy loharanom-bola mihena, tokony hifantoka amin'ny fandidiana sy ny famoronana endri-javatra vaovao izy ireo, tsy ratsy ny interface, azo ampiasaina tokoa, tamin'ny fotoan'ny Office 1997 dia tsy nisy nitaraina.
... Heveriko fa tena ilaina tokoa ny mifanentana sy ny fahamarinan-toerana amin'ireo fisie fisie, saingy mieritreritra aho fa ny interface-n'ny mpampiasa dia mbola azo amboarina amin'ny fomba izay mahafinaritra ny maso, tsy misy fanararaotana.
Heveriko fa ny fampiharana ny gradients miloko manokana dia ampy hifantohana amin'ny fanatsarana ny endrik'ireo antontan-taratasinao, ary angamba manampy lohahevitra kisary vaovao.
Tsy dia miraharaha ny interface mihitsy aho satria hitako fa tena tsara. Tsy tiako ny hanombohan'izy ireo manao fanovana toa ny MS ao amin'ny Birao farany misy azy ireo, izay namoizako tena tanteraka ary na dia manonta na manao Preview momba izay ataoko aza dia mitaky fotoana betsaka kokoa noho ny tamin'ny kinova teo aloha (in In my case, ny fotoana itiavako manao zavatra dia ny mamaritra ny famokarako), izay nanana ny safidy teo amin'ny bara ambony, azon'ny olona idirana. Heveriko fa ny LO dia tena tsara toa ny amin'izao fotoana izao ary ny tokony hiasan'izy ireo bebe kokoa dia ny fifanarahana amin'ireo Office Suites hafa satria nahavita asa tany LibreOffice aho, nosokafako tao amin'ny Excel izy ireo taty aoriana ary mitovy daholo ny rehetra afa-tsy ny sisiny, andalana, ny endri-tsoratra indraindray, sns. Raha tsy izany dia tena tsara ary misokatra amin'ny kinovan'ny excell, na taloha na vaovao. Na izany na tsy izany, tsara ny manisy zava-baovao hatrany.
Raha jerena amin'ny fomba fijery azo ampiasaina, be dia be ny blazy mahasosotra ahy rehefa miasa, ny interface dia tsy natao hametrahana rindrambaiko. Te hanana gtd (mahazo-zavatra-vita) haingana !!
Fiasa sy hatsarana voadio. Ny LibreOffice dia tsara lavitra noho izany
noho ny Microsoft Word. Ny hany zavatra heveriko fa tsy ampy dia ny manatsara ny estetika
ny sary masina. Fa tsy amin'ny olona. Firefox ihany no ampiasaiko ary tsy mbola nanao izany
nametraka People. Resaka tsiro.
Azonao lazaina amiko ve izay tsara kokoa? Misaotra anao.
Arkangelovich dia hoy izy:
Tsy mino an'izany akory ianao. Raha vantany vao fantatrao hoe aiza ny zavatra ao amin'ny Microsoft Office dia mavitrika toy ny programa rehetra izany. Ary andao tsy hiresaka momba ny fahefana, voafetra ihany ny Libreoffice. Amin'ny maha-mpampiasa Libreoffice ahy dia holazaiko aminao fa rehefa miasa amin'ny rakitra sarotra ianao dia tsara izany. Manomboha mametraka sary dia ho hitanao hoe aiza no misy ny herinaratra. Miara-miasa amina boky fanadihadiana lehibe sy asa misy sary aho, ohatra, ny 4 megabytes ao anaty toerana iray, tsy azo iasana
Na izany aza, mihinana izay atsipinao io ny Microsoft Office. Libreoffice dia tsara, ary amin'ny maha-vondrom-piarahamonina dia tsara izany, fa aleo tsy mandeha lavitra.
Mamaly an'i Arkangelovich
Eny, tsy fantatro izay hevitrao, na dia tiako aza ny manome hevitra mikasika manokana an'ireo rindranasa sy ny rafitra fikirakirana, raha tiako kokoa fa ny fototra dia nanome asa bebe kokoa mifandraika amin'ny fampidirana amin'ny birao, tsia maninona; ohatra amin'ny KDE, Gnome, XFCE, sns. ampidirina miaraka amin'ny lohahevitra mahazatra sy mahazatra. Maneho hevitra momba ny etsy ambony aho satria amin'ny sehatra hafa ary amin'ity iray ity dia niresaka momba ny interface ny suite dia tena archaic ary, raha ny marina, manana ny endrika sy ny fahatsapan'ilay rindrambaiko tamin'ny taona 90 farany teo taonjato.
Na izany na tsy izany, tsiro manokana izany, tsy haiko izay hevitrao.
Tsy milaza aho fa ny LibreOffice dia tokony hanana fampiasa amin'ny fomba Ribbon, fa tongava, ny fanovana dia ilaina amin'ny sary masina sy ny fomba fandaminana ny fampahalalana ao amin'ny biraom-pitaovana ... zavatra tena manokana izany, mazava ho azy .
Ambonin'ny zavatra hafa rehetra, marina izany, mila fampidirana bebe kokoa isika, fampifanarahana bebe kokoa .. sns
Niresaka tamin'i Michael Meeks avy amin'ny LibreOffice (libreoffice [amin'ny] lists.freedesktop.org) ………. Nanontaniako izy raha manana API ho an'ny tranomboky VCL izay ampiasain'ny LibreOffice ……. Tsy namaly ahy izy ireo…. Zara raha manana fampahalalana fotsiny ry zareo… nomeny ahy ity …… .. https://wiki.documentfoundation.org/Development/WidgetLayout …… .. ity rohy ity dia mampiseho ny fomba fanaovana sy ny fiasan'ny tranomboky VCL…. http://docs.libreoffice.org/vcl/html/classes.html ..........
Miorina amin'ireto tranomboky ireto ny interface manontolo …… .. Ambonin'izany rehetra izany, ny zavatra ratsy dia tsy misy ireo widgets ao amin'ny Gtk 3.6 na Qt 4.9 …………
ary ireo trano famakiam-boky ireo dia tsy namboarina hiasa amin'ny Gtk3 sy Qt 4.9 ………. GTk3 sy Qt 4.9 dia tsy manana fiasa izay ampiasain'ny LibreOffice amin'ny interface ……………
Ny trano famakiam-boky VCL rehetra dia tsy maintsy averina soratana mba hifanaraka amin'ny Gtk 3.6 na Qt 4.9, asa goavana io …………… Fa ny mpamorona PYTHON, RUBY, WxWidgets, VALA, sns dia mahatonga ny tranombokiny hifanaraka amin'ny Gtk 3.6 na Qt 4.9 asa tsara nefa ataon'izy ireo.
Raha mahazo tutorial miaraka amina ohatra tsotra miaraka amin'ny VCL ianao, dia ilaiko izany ………
Miaraka amin'i Charles Schulz avy any LibreOffice aho… ao amin'ny GOOGLE +… https://plus.google.com/u/0/communities/105920160642200595669
afaka mifandray amin'ireo mpamorona LibreOffice
Michael Meeks sy Bjoern Michaelsen no mitarika ny fanovana kaody amin'ny tetikasa LibreOffice.
Dracko dia hoy izy:
mmm Heveriko fa ny fanandramana voalohany ho an'ity fanovana manaraka ity amin'ny interface, miaraka amin'ity dia heveriko fa hametraka lohahevitra fanamoriana bebe kokoa sy tsara kokoa izy ireo tahaka ny mitranga amin'ny firefox, manomboka eto dia afaka mamorona lohahevitra manokana sy mizara azy ireo koa ireo mpandahatra programa. na dia ny fomba Interface hafa aza, arahaba.
Valiny tamin'i Dracko
tsara tadiavina afaka manova ireo sary masina
Fomba fampiasana Raspberry pi ho foibe fampitam-baovao
Ahoana ny fametrahana Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal tsikelikely